Shina Manendy vy amin'ny lapoaly tokana miaraka amin'ny tahony hazo tokana dia tsy mora raikitra raha tsy misy fonosana Famokarana sy ozinina | SANXIA
Ny fanendasana vy fanendasana vy miaraka amina tapa-kazo tokana dia tsy mora raikitra raha tsy misy sarona
Famaritana:20320 * 95mm
Ambany vilany:Afaka misafidy boribory na fisaka ianao
Izy io dia vita amin'ny vy vy fanarahana fenitra matianina. Izy io dia mahasalama sy azo ampiharina. Tsy mora ny vaky aorian'ny fampiasana maharitra. Izy io dia vilany ilaina ho an'ny fianakaviana rehetra.
Rehefa mahandro dia mitovy ny fitarihana ny hafanana, kely ny jiro, ary matevina ny fanambanin'ny vilany, izay afaka mitahiry hafanana. Noho izany, ny fitaovan'ny sakafo dia tsy mora apetaka, ary azo masaka haingana kokoa, izay afaka mitahiry sakafo feno. Ny lovia nendasina dia matsiro sy matsiro.
Ny akora vita amin'ny vy kisoa miaraka amin'ny fahadiovana avo lenta dia voafantina hentitra. Amin'ny alàlan'ny fitsapana am-polony maro dia azo antoka fa ho tonga casting mahomby sy mahomby izy io. Voalohany, hamairan'ny milina mandeha ho azy izy io, ary amin'ny farany, hamairan'ny asa-tanana. Milamina ny tampon'ny vilany ary tena tsara ny tahony. Tsy misy firakotra simika amin'ny vilany, ka tsy mora ny harafesina. Ny hatevin'ny vilany dia natao tamim-pitandremana, noho izany dia mahomby kokoa amin'ny fitarihana hafanana sy ny fitehirizana ny hafanana.
Ny tahony dia vita amin'ny walnut mainty avo lenta miaraka amin'ny endriny voajanahary ary ny fanoherana ny hafanana avo. Tsy mora ny manova endrika sy mamaky rehefa ampiasaina maharitra. Mifanaraka amin'ny lokon'ny vilany vy vy io. Tsotra sy ahazoana aina ny mitazona azy. Izy io dia manana fahaiza-mitanjaka matanjaka ary marin-toerana.
Ny sofina vilany dia ampifandraisina amin'ny vatan'ny vilany. Ny fitaovana vy fanariana mitovy dia tsy matahotra ny mari-pana ambony. Mafy kokoa izany. Tsy mila manahy ianao fa hatsehin'ny fatana rehefa mahandro. Rehefa manosika ny farany dia afaka mampiasa fonon-tànana fanoherana «scalping» ianao.
Ny vilany dia azo amboarina amin'ny famaritana samihafa, ny eo ambany dia mety ho boribory ambany, na fisaka ambany, azonao atao ny misafidy arak'izay ilainao. Ho fanampin'izany, ny sarom-bilany dia misy sarony hazo sy rakotra vera henjana, miankina aminao ihany koa ny fomba.
Teo aloha: Milk Pot Cast Iron Enamel Casserole Non-Stick Frying Pan Baby Frying Pan Baby Sakafo Famonoana Hot Milk Noodle Pot
Manaraka: Ny lafaoro holandey mahasalama dia manana fahaizana mahandro tsara kokoa
namel Skillet, nantsoina hoe Skillets Iron Cast, ncoated Cast Iron Skillet, xtreme Iron Skillet, t stainless Cast Iron Skillet, Cast Iron Skillet,